Yiziphi izici zokugqoka kwe-hipster nemfashini? | Amadoda aSitayela
Izingubo zeHipster / hipster
Isitayela se-hipster ngeso iqembu lasemadolobheni elinezimpawu ezivelele kakhulu.
Izembatho zeHipster zisuselwa ku kabusha nemfashini vintage, futhi naku- ukuthambekela okunye.
1 Ezinye izici zesitayela se-hipster
2 Zinjani izingubo ze-hipster?
3 Izakhi zokugqoka ze-Hipster
Ezinye izici zesitayela se-hipster
Sibonile amasampula wesitayela se-hipster ezindaweni ezahlukene, nge intshebe, i-la Bin Laden, enezingubo eziqinile ze-hipster, izikhindi nezibuko zohlobo lweWayfarer.
Imboni yamadoda yemfashini yehipster iya ngokuya yehlukahluka. I- brand best emakethe, njengoba kunjalo ngoPrada, Hermés, Lanvin, Zara, Gucci, H% M, Abercrombie & Fitch.
Ngokwe izitolo zibhekisa, ngokwanda banikela ngezingubo ze-hipster. Kulinganiselwa ukuthi, E-United States, ukuthengiswa kwezingubo zabesilisa kukhiqiza imali engaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezingama- $ 60 ngonyaka.
Zinjani izingubo ze-hipster?
Izembatho zeHipster ziletha ukuthinta okwehlukile kwezinye izitayela. Ngale ndlela, kungatholwa izithunzi ezahlukahlukene, njengoba zikhona izingubo eziningi ongakhetha kukho.
Amathrendi we-Hipster amukela isitayela sokuvuna, esingajwayelekile futhi esinobuntu obuningi. Ngaphezu kwezingilazi ze-pasta ezaziwayo, ezijwayelekile zalo mkhuba wamanje, baya ezimakethe ukufuna izingubo ze-hipster. Isici esivelele kakhulu isikhafu, Nganoma yisiphi isikhathi sonyaka.
Izakhi zokugqoka ze-Hipster
Njengoba sibonile, izingubo zivame ukuba nazo ukuvela kwezingubo ezigugile noma ezigugile.
Imfashini yeHipster ihlanganisa izingubo ze-retro nezintsha.
Ngaphezu kwesikhafu sesici, futhi amabhulukwe ohlobo "skiny" akha izingubo ze-hipster, ngokuvamile imibala emnyama nemithunzi.
I-Las Amahembe wesitayela se-Hipster agqokwa nge-plaid noma ngemibhalo ngesibindi, nezinkinobho ziboshiwe.
Izikibha kaningi zinokuthinta okuhlekisayo.
Ngamazinga okushisa aphansi, indoda ye-hipster isebenzisa isitayela sevintage hoodies noma amajakhethi.
Njengezesekeli, kusetshenziswa izikhafu, izigqoko zesitayela sakudala, izikhwama ezincane, njll.
La intshebe ekhulile kubalulekile ngobuhle be-hipster.
Imithombo yesithombe: www.komparte.com / Umhlahlandlela Wamadoda
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Amathrendi » Izingubo zeHipster / hipster